Tuesday October 09, 2018 - 20:24:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maxkamadda islaamiga wilaayada Jubbooyinka ayaa maanta gelinkii dambe Xukun dil ah ku fulisay Kooxo Jawaasiis ah oo u shaqeynayey Sirdoonka Reergalbeedka
Fagaare kuyaal magaalada Jilib
Fagaare ku yaala magaalada Jilib ayaa galabta lagu toogtay 5 Nin oo Xarakada Al Shabaab ay sheegtay in ay yihiin jawaasiis u shaqeynayey Sirdoonno Caalami ah iyo kuwa Maxalli ah, dadka ladilay qaarkood waxay ku lug laahaayeen shirqoollo dhagar ah oo lagu fuliyay Dad Soomaali ah halka kuwa kale iyagoo shirqoollo maleegaya ay gacanta ku dhigeen sirdoonka Al Shabaab.
Ragga Jilib lagu dilay waxay u kala shaqeynayeen Sirdoonnada dowladaha Mareykanka,ingiriiska iyo dowladda Federaalka Soomaaliya dhammaantoodna waxay geysteen falal dambiyeedyo.
Hoos ka akhri Magacyada Jawaasiistii Maanta ladilay iyo Jihooyinka u shaqeynayeen.
1-Cabdi casiis Cabdi Salaam Sheekh Xasan oo 22 sana jir ah wuxuu u shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka, Maxkamadda horteeda ayuuna ka qirtay dambiyada uu geystay.
2-Maxamed Cabdullaahi Cawil oo 35 sana jir wuxuu la shaqeynayay Mareykanka wuxuuna ka dambeeyay weerar Mareykanku ka geystay magaalada Saakoow. wuxuu sheegay in ciidamo Mareykan ah uu ku hoggaamiyay guri ku yaalla degmadaas halkaas oo dad lagu dilay.
3-Jeyllaani Cabdullaahi Nuur oo 36 sana jir ahaa wuxuu u shaqeynayay Sirdoonnada Mareykanka iyo dowladda Federaalka wuxuuna ka dambeeyay duqeymo ka dhacay Sh/Hoose, wuxuu sheegay in uu shariixo saaray laba gaari oo la duqeeyay, sidoo kale wuxuu sheegay in uu gudbiyay macluumaad muhiim ah waxaana shaqa geliyay xildhibaan katirsan Maamulka Hirshabelle.
4- Cawaale Axmed Max'med waa 32 sana jir, wuxuu u shaqeynayay sirdoonka Ingiriiska ee loo yaqaan MI6 wuxuu sheegay in uu muddo sanada ah u shaqeynayey dowladda UK, sidoo kale Ninkan Jaasuuska ah ayaa maxkamadda ka hor qiray in uu basaasay dad Soomaali ah oo dalka UK deggan, isagoo ugu dambeyntiina ay saraakiisha MI6 lacago siiyeen una soo direen Soomaaliya si uu ugu biiro wax loogu yeero 'Daacishta Soomaaliya' waxaana gacanta lagu soo dhigay isagoo muslimiinta dhagar umaleegaya.
5-Cabdu Qaadir Isxaaq Amiin wuxuu jawaasiis dowladda Federaalka uga qorayay gobollada Jubbooyinka isagoo shaqadiisa ku jira ayaa gacanta lagu soo dhigay.
Halkan ka dhageyso Qaadiga Maxkamadda Islaamiga Jubbooyinka oo Xukunka Ridaya MP3